Farmaajo oo go’aankiisa ku aadan kiiska Badda u sheegay Qaramada Midoobey – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Allhadaaftimo September 26, 2019 Uncategorized
“Iyadoo dowladda Soomaaliya ay dhiiragelineyso isdhexgalka ganacsig ee gobolka ayna bulshada ganacsatada Soomaaliya ay ku boorineyso in ay maalgashadaan dalalka Bariga Africa, waxay Somalida sii wadaan in ay dhaqaale geliyaan Jamhuuriyadda Kenya taas oo gacan ka geysata koboca iyo barwaaqada dhaqaale”, ayuu yiri madaxweyne Farmaajo.
Balse madaxweynaha Soomaaliya ayaa Qaramada Midoobeey ka sheegay in “Soomaaliya iyo Kenya oo xuduud ka wadaaga dhanka bad-weynta Hindiya, ay ku naaloon doonaan xiriir saaxiibtinimo oo nabad ah”.
“Wadahadallada laba geesoodka ahaa ma guuleysan, iyo heshiisyadii hore. Si loo helo nabad iyo xal kama dambeys ah, sannadkii 2014-kii, Soomaaliya oo raaceysa xeerka caalamiga ah waxay dacwad u gudbisay Maxkamadda Cadaaladda ee Caalamiga ah”.
Khilaafka Kenya iyo Soomaaliya ee dhanka xuduudda wuxuu sababay in xiriirkii diblumaasiyadeed ee labada dhinac ka dhexeyay uu go’o iyadoo tallaabooyiin adag ay is dhaafsadeen.
Kiiska oo dhageysigiisa ay maxkamadda billaabi lahayd horraantii bishan September, ayey Kenya dalbatay in dib loogu dhigo sababto la xiriira qorshada qareeno dheeraad ah, sida ay qoreen warbaahinta dalkaas. ICJ ayaana go’aamisay in dacwadda labada dal la qaadi doono 4-ti bsiha November ee sannadkan.
Dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxay sheegtay in ay ka soo horjeesatay dalabka Kenya oo markii hore lagu sheegay “in uu ahaa sannad in dib loo dhigo”.
“Soomaaliya oo xubin ka ah Qaramada Midoobeey, kana mid ah saxiixayaasha maxkamaddan, waxaa ka go’an in la arko xalkan maxkamadeed inuu dhammaadka gaaro.”
“Soomaaliya waxay ballan qaaday in ay u hoggaansanto go’aanka ugu dambeeya ee maxkamadda, ayna aqbasho xuduudda ay Maxkamadda jaangoyso”, ayuu yiri Farmaajo.
“Wuxuu go’aanka maxkamadda sidoo kale qabanayaa Kenya”, ayuu hadalka ku daray.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa horey u kulansiiyay labada madaxweyne, kaas oo lagu gaaray heshiis balse markii dambe fashilmay.
Hadda intii ay ku sugnaayeen magaalada New York, waxaa labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya kullansiiyay madaxweynaha Masar Cabdifitaax Al-Sisi oo sidoo kale ah gudoomiyaha
Afhayeenka madaxweyne Farmaajo, Cabdinuur Maxamed ayaa kullankaas Al-sisi ka dib, bartiisa Twitter-ka ku qoray “Waxaan isku afgarannay soo celinta xiriirka iyadoo caqabad aysan ku yeelan kiiska maxakamadda ICJ ee badda”.
Previous M/weyne Farmaajo oo isu Diyaarinaaya khudbaddiisii Caawa ee UN waxa la sugaya bal in uu soo hadal qado arinti Badaee Maxkamada adduunka
Next Beeralayda Gobolka Sanaag Oo Wasiirka Beeraha Ugu Baaqay Inuu Fuliyo Balan Qaadyo Uu Hore Ulla Galla